Ahoana ny famakiana tabilao Forex, Torolàlana ho an'ny mpandrafitra amin'ny tabilao Candlestick, tsipika ary Bar
fanabeazana - Lahatsoratra & torolalana - forex basics articles - Ahoana ny fomba famakiana tabilao Forex
Ao amin'ny tontolon'ny varotra Forex dia tsy maintsy mianatra ny tabilao aloha ianao vao manomboka manomboka varotra. Io no fototry ny ankamaroan'ny fifanakalozana sy ny fanombatombana an-tsokosoko ka izany no antony lehibe indrindra ho an'ny mpivarotra. Ao amin'ny tabilao Forex no ahitanao ny tsy fitovizan'ny vola sy ny fifanakalozana azy ary ny fiovan'ny vidin'ny ankehitriny amin'ny fotoana. Ireo vidin-javatra ireo dia avy amin'ny GBP / JPY (kilao anglisy hatramin'ny yen japoney raha) ka hatramin'ny EUR / USD (Euros hatramin'ny Dolara amerikana) ary mpivarotra vola hafa azonao jerena.
Aart Forex iray dia faritana fa sary fahitana ny vidin'ny sandam-bola amin'ny fe-potoana manokana.
Izy io dia manome sary an-tsaina ny asan'ny varotra mitohy mandritra ny vanim-potoana ara-barotra manokana na eo aza ny faharetan'izany na minitra, ora, andro na herinandro. Ny fiovan'ny vidin-javatra dia mitranga amin'ny fotoana tsy ampoizin'ny olona toa ny mpivarotra, tokony ho tratrarintsika ny loza ateraky ny varotra toy izany ary hanao probabilitation ary ity ianao dia mila ny fanampian'ny tabilao.
Tena mora ny mampiasa tabilao rehefa azonao ny fiovana amin'ny vidiny amin'ny fijerena azy ireo fotsiny. Eto amin'ny tabilao, ho hitanao hoe mihetsika ny vola isan-karazany ary azonao antoka ny fironana miakatra na hidina amin'ny fotoana manokana. Misy ifandraisany amin'ny famaky roa sy ilay Y-mpiray dia eo amin'ny lafiny mitsangana, ary izy io dia miatrika ny marika vidiny raha toa ny fotoana aseho amin'ny lafiny mitsivalana izay x-mpiray.
Taloha, ny olona dia nampiasa tanana mba hanaovana sary tabilao fa ankehitriny kosa, misy logiciel izay afaka mamolavola azy ireo ankavia miankavanana any amin'ny x-mpiray.
Ahoana ny fiasan'ny tabilaon'ny vidiny
Ny tabilao vidiny dia mampiseho fiovan'ny fangatahana sy famatsiana ary tanteraka izany isaky ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny fotoana rehetra. Misy zavatra vaovao isan-karazany izay ho hitanao ao amin'ny tabilao ary tafiditra amin'izany ny vaovao sy ny zavatra antenaina izay manampy ireo mpivarotra hanitsy ny vidin'izy ireo. Na izany aza, ny vaovao dia mety hafa noho ny amin'ny ho avy, ary amin'izao fotoana izao, ny mpivarotra dia hanao fanitsiana bebe kokoa ary hanova ny vidiny. Mitohy ary tsy an-kijanona izany.
Na avy amina algorithm maro na olombelona ny hetsika dia mifangaro azy ilay tabilao. Toy izany koa no hahitanao fampahalalana hafa ao amin'ilay tabilao na avy amin'ny banky mpanondrana, banky foibe, AI, na mpivarotra fivarotana ihany koa.
Ny karazany samihafa amin'ny tabilao Forex
Misy karazany karazany ny tabilao amin'ny Forex fa ny malaza indrindra sy malaza indrindra dia ny tabilao tsipika, tabilao bara, ary kerobelika.
Ny tabilao Tsipika no mora indrindra amin'ny rehetra. Izy io dia mamorona tsipika iray hiarahana amin'ny fiakaran'ny vidiny ary amin'ity fomba ity dia manondro ny fiakaran'ny vidim-bola sy ny fahatongavan'ny vola mandeha amin'ny fotoana. Na dia mora ny arahina, tsy manome fanazavana ireo mpivarotra mikasika ny toetran'ny vidin'ny toetrany. Ho hitanao ihany aorian'ny fotoana izay nifarana tamin'ny vidiny ny X ary tsy misy hafa.
Na izany aza, dia manampy anao amin'ny fijerena mora foana ny fironana ary manao fampitahàna amin'ny fiakaran'ny vidin'ny vanim-potoana samihafa. Miaraka amin'ny tabilao tsipika, azonao atao ny misintona ny fihetsehana ny hetsika amin'ny vidiny sahala amin'ny ohatra EUR / USD eto ambany.
Raha ampitahaina amin'ny tabilao tsipika, dia sarotsarotra ihany ny tabilao na dia mihoatra noho ny tsipika amin'ny fanomezana antsipiriany aza izany. Ny tabilaon'ny bara koa dia manome fomba fijery ny fisokafana, fanidiana, avo lenta ary ambany vidin'ny tsiroaroa-bola. Ao amin'ny farany ambany amin'ny axis mitsangana izay mijoro ho an'ny fifanakalozana ara-barotra ankapobeny ho an'ny mpivady vola, ianao dia hahita ny vidin'ny varotra ambany indrindra amin'izany fotoana izany raha ny ambony indrindra no eo amin'ny tampony.
Ny sàm-baravarankely dia maneho ny vidin'ny fisokafana amin'ny sisiny ankavia amin'ny tabilao bara sy ny sarany fanidiana eo amin'ny ankavanana.
Noho ny fihenan'ny fihenan'ny vidin-javatra, dia mihabe ny hidy rehefa mihena izy ireo rehefa mbola mihena ny fihenan-danja. Ireo fihenam-bidy ireo dia vokatry ny fanamboarana ny seranana.
Ny sary eto ambany ho an'ny mpivady EUR / USD dia haneho anao fanoharana tsara amin'ny fomba fijerin'ny tabilao bara.
Ny tabilao fitoeran-jiro dia mampiasa tsipika mitsangana mba hanehoana ny varotra fifampivarotana avo lenta toy ny ataon'ireo tabilao Forex hafa. Misy sakana maromaro izay ho hitanao amin'ny afovoany izay mampiseho ny vidin'ny fisokafana sy fanidiana.
Ny sakana afovoany miloko na feno dia midika fa ny vidin'ny famaranana a vola mpivady ambany noho ny vidiny fanokafana. Etsy ankilany, raha ny loko afovoany dia manana loko hafa na tsy fenoina, dia nikatona tamin'ny vidiny avo kokoa noho ilay nosokafany.
Ahoana ny famakiana ireo takelaka fanasivanana
Mba hamakiana tabilao labozia, tsy maintsy aloha ianao fa tonga amin'ny endrika roa; ny labozia amidy sy ny mpivarotra araka ny hita etsy ambany.
Ireo endrika labozia roa ireo dia manome anao ho mpivarotra fanazavana tena lehibe. Anisan'izany:
Ny labozia maitso izay indraindray dia maneho ny mpividy ary manazava izy fa nandresy tamin'ny fotoana iray ny mpividy satria ny haavon'ny vidin'ny fanakatonana dia avo noho ny an'ny fisokafana.
Ny labozia mena izay mainty dia maneho ny mpivarotra ary manazava izy fa nandresy ny mpivarotra tamin'ny fotoana iray satria ny haavon'ny vidin'ny fanidiana dia ambany noho ny an'ny fisokafana.
Ny haavon'ny vidiny ambany sy ambony dia manazava fa ny vidiny ambany indrindra sy ny vidiny farany azo tamin'ny vanim-potoana dia voafantina.
Raha tsy fantatrao ny fanaon'ny Forex, dia tokony hanao fahadisoana maromaro ianao ary ny dingana voalohany hisorohana ny hiseho toy izany dia ny fahalalana ny fomba hamakiana ireo tabilao. Betsaka ny karazana tabilao Forex nefa ireto telo nasongadinay eto ireto no be indrindra. Afaka mandeha miaraka amin'izay tianao hahatsapa ianao ary mahatakatra ny fiasan'ny tabilao alohan'ny fitsidihan'ny tontolon'ny Forex.